In shabakadda LAN 192.168.8.100 waa IP. Shakhsiyaad fara badan ma heli karaan habka loo soo galo ee router wireless WIFI intranet-ka. Waxaad isku dayi kartaa inaad riixdo xiriirka: https://192.168.8.100 soo gal interface interface. Haddii aadan lifaaqi karin, waxaad tixraaci kartaa tafatirka login maareynta router. Haddii aad ilowday magacyadaaga adeegsiga iyo furaha sirta ah, si fudud u eeg sumadda ama buugga router-ka.
Cinwaanka IP-ga ayaa adeegsada 192.168.8.100, sida loo adeegsado?
Marka hore, kor u qaad khibrada yar ee la wadaago ee cinwaanada IP. Cinwaanada IP-ga waxaa loo kala saaraa 5 nooc oo ABCDE ah, oo ABC-da inta badan laga isticmaalo. Saddexda nooc ee cinwaanada, hal qeyb ayaa ah cinwaanada la keydiyay, & xirmooyinka cinwaannadaas aan la adeegsan karin. Isla markiiba wuxuu ku faafay shabaqa, IP waa cinwaan xafidan cinwaanada fasalka C, caadi ahaan waxaa loo adeegsadaa shabakadaha LAN, maaskaro subnetka caadiga ah ee cinwaanka fasalka C waa 3, oo qeexaya in cinwaanka fasalka C uu qaadi karo 255.255.255.0 IPs Sida iska cad, oo ay weheliso hal wakiilka shabakada, waxaa jira xitaa hal wakiil oo gudbiya. Kaliya 256 ayaa loo magacaabi karaa isticmaalaha. Tusaale ahaan, isticmaalaha IP-ka ee shabakadda 254 wuxuu noqon karaa 192.168.1.0-1. Isdhexgalka dhexdooda ah uma baahna inuu dhex maro routerka. Si toos ah faylasha waa loo dhaqaajin karaa.
In la yiraahdo, fikradda cinwaankan IP-gu waa mid aad u baahsan. Maaddaama ay tahay cinwaan la xafiday, waxay muujineysaa in loo isticmaali karo LAN sidoo kale. Caadi ahaan, waxaa loo adeegsadaa isticmaalaha IP, sida IP-ga mantissa oo ah .1 guud ahaan waa loo hayaa meesha laga soo galo, sidaa darteed 192.168.1.2-192.168.1.254 runti waa loo qoondeeyay isticmaalaha. Haddii LAN ku jiro server DHCP, waxaad gebi ahaanba dajin kartaa kooxda cinwaanka IP-ga 192.168.1.2-192.168.1.254. Maqaalkani wuxuu si otomaatig ah u qaabeeyaa cinwaanka IP ee isticmaalaha.
Waxyaabo ka duwan ayaa ah router-yada wireless-ka ah ee sida caadiga ah loo isticmaalo maalmahan. Caadi ahaan, dekedda IP LAN ee aaladda noocan ah waxay had iyo jeer leedahay mantissa ah .1. Waxaa loo soo jeediyay macaamiisha inay wax ka beddelaan dekedda LAN IP cinwaan dheeraad ah, si macaamiisha kale aysan u maleyn karin. Booqo router-yada wireless-ka ah ee loo yaqaan 'LAN port IP' tusaale ahaan, IP waa ikhtiyaar weyn. Sida iska cad, LAN dekedda IP-da ayaa sidoo kale la dejin karaa, ma jirto baahi loo qabo in la xusho IP-ga iyadoo la adeegsanayo qaybta shabakadda bilowga ah. IP-ga qaybaha shabakadaha kaladuwan waa qarsoodi dheeri ah oo aamin ah; si kastaba ha noqotee, waa inaad maskaxda ku haysaa inaad ka bedesho marinka isticmaalaha midka u dhigma, haddii kale ma ogaan doonto sida loogu xiro shabakadda.
In yar oo ka mid ah shirkadaha yar yar ama dugsiyadu waxay inta badan codsadaan in la dejiyo meel ka baxsan cinwaanka IP-ga, & isticmaalka xigga ee loo adeegsado IP qaybinta si loogu isticmaalo dhammaan shirkadda ama nidaamka iskuulka si loo helo shabakadda. Cinwaanka IP-ga ee ay adeegsadaan mashiinada iskuulada noocaas ah ama shirkaduhu waa sheyga 'intranet IP'.
Waa in la sheegaa in kombiyuutarada ku jira shabakada gudaha ay u diri karaan codsiyada isku xirka kombiyuutarada kale shabaqa, wali kumbiyuutarrada kaladuwan ee internetka ma diri karaan codsiyada isku xirka kombiyuutarada shabakadaha gudaha sababo la xiriira FTP server-ka shabakada banaanka.